Uyilo loMzobo weNtloko | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo loMzobo weNtloko
Ngokoluvo lwakho, kufuneka ibe yintoni Iimpawu zentloko yephephandaba? Yintoni eyenza intloko yephephandaba ihluke?
Ukuba uyaluthanda olu hlobo lokufunda kwaye emva koko ufunda iphephandaba elithile Ngexesha lokuthenga, mhlawumbi enye ye- iimpawu oqhelene kakhulu nazo yintloko. Ukulungiselela ulwazi, intloko yephepha-ndaba ibandakanya elona cala lingundoqo elinokuba lilo ngokomgaqo sivumele ukuba sahlule iphephandaba nakweliphi na icala y Que isihloko sisibuso sephephandaba, luphawu lwakho, olona phawu lwakho lommeli.
1 Kodwa yintoni uyilo lwegraphic olunxulumene nentloko?
2 Imalunga nokuqokelela lonke uphawu lwenkampani
Kodwa yintoni uyilo lwegraphic olunxulumene nentloko?
Eli nqaku liza kuzisa ezinye izinto eziqwalaselweyo kwi- ukulungiswa kwamaphepha ndaba, ithathela ingqalelo imiba yenkqubo kuyilo lwegraphic. Lo nto, Siza kunika imizekelo yezi ndlela esetyenziswe ngabaqulunqi ukunika inkuthazo kwimixholo yamaphephandaba, ngokufanayo, siza kubonisa ezinye Imibuzo echaphazelekayo malunga noyilo loMzobo ibhedi kunye nezinye iindawo.
Ngoku, ukubuyela kumzekelo wethu, kulula kakhulu ukufumanisa iphepha lethu elithandayo, kodwa sinokuqinisekisa ukuba Kulula kuthi ukwahlula amaphephandaba anomnye umxholo. Ngale ndlela, yintoni esivumela ukuba sahlule ngokulula?
Kubonakala ngathi kunyanzelekile Chaza umsebenzi welogoUkukhutshwa okusivumelayo Chonga ekuboneni uphawu okanye umkhwa Kwaye ukuba ilogo iyakwazi ukudibanisa uphawu okanye umfanekiso ngokutsalwa (umfanekiso onophawu lokuqala), uvumela nabani na ojongayo, ukuba anike ingxelo ngento esemva kwayo. Zininzi logo imizekelo Kubo bonke ubomi bethu bemihla ngemihla, iilogo esinokuzifumana kwihlabathi lezihlangu, izixhobo zomculo, iimoto, njl.
Ngale ndlela, isindululo siqulathe nika i-headboard ukuba ulwazi oluveliswe yi-logo, ngendlela apho abafundi banokuchonga xa bejonga kuqala imveliso esemva kwentloko, ukuqokelela oku, uthotho lwe Iimpawu ezibonakalayo Oko kuya kubonakala kwi-header kwaye kungenxa yendawo yeendaba, umzekelo, i-header iyasilela inqaku lamandla amakhulu. Esi sisiqwenga esingagqibekanga iqulethe konke ukwenziwa kwemizobo, ke ngoko, umyili kufuneka alumke xa eyila, kuba iya kuba sisalathiso semifanekiso sokuba bonke abantu banxibelelana nephephandaba.
Imalunga nokuqokelela lonke uphawu lwenkampani
Kubonakala ngathi ikhona ukufana okuthile phakathi kwe-header kunye nelogo kwaye bobabini kufuneka babe nomtsalane emehlweni abasebenzisi, kufuneka babonakalise into, mhlawumbi ubuntu, umyalezo okanye umfanekiso oya kuthi ekugqibeleni uchaze inkampani okanye umbhali emva kwephephandaba. Lo nto, igama elingasentloko kufuneka lifundeke ngaphandle kwengxaki enkulu, kufuneka bahlangane nazo zonke ezi mpawu ngezixhobo ezimbalwa, ukunqanda ukulayisha ngaphezulu.
Kwelinye icala, kufuneka siqwalasele typography, eziza kungena entlokweni yephephandaba. Oku kufanelekile ngokweethoni zebhodi yentloko, ngendlela yokuba kungabikho kugqwetha okubonakalayo kwimodeli. Nangona mhlawumbi ukugqwetha kungayinika iimpawu ezizizo eziye zabetha, kube lula kubasebenzisi ukuba bazikhumbule. Emveni kwakho konke, umbono kukunika isazisi entlokweni, Ukuthatha ingqwalaselo esetyenziselwa iilogo, kunye nokuqinisekisa ukuba inefonti efanelekileyo kwimvelaphi yentloko yayo.
Kufuneka zithathelwe ingqalelo Ukuqwalaselwa okuninzi ekudalweni kweentloko, apho ubume bendawo ingomnye umba wokuqwalaselwa. Kwaye kunjalo Inkcazo-ntetho kufuneka ithwale uzinzo olubonakalayo kubafundi, Ukuyivumela ukuba bayifunde ngamehlo, bahlule ngeliso lenyama kwaye bayigcine ixesha elide.
Kungenxa yoko le nto izihloko kufuneka zithathele ingqalelo iindlela okanye iindlela ezisetyenziselwa ukwenza iilogo. Kungoko ke uhlengahlengiso lobuchule kwindawo yoyilo lwegraphic header.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo loMzobo weNtloko
EMILIO CABALLERO-VAZQUEZ sitsho
Ndineshishini lokushicilela ipleyiti eshiyekayo, kubahlobo endisebenza nabo, kwiinkqubo zecpt kodwa ndingenazo izimvo ezintsha kuyilo lwegraphic, NDICELA NDITHINI NGALO?… .. IMIBUZO EMILIO
Phendula EMILIO CABALLERO-VAZQUEZ
IGraffiti kunye nobudlelwane bayo noyilo lwegraphic